Barreessa irratti Barbaaduuf Baakka Buusu
Barreessaa irratti Barbaaduu fi Baakkabuusu
Galmeewwan barruu irratti jechota, dhangeessuu, akkaataaleef dabala barbaadu nidandessa. Bu'aa tokko irrra issa ittianatti naanna'u nidandessa, ykn mara bu'aa altokko Shoolu nidandessa, kana booda dhangii biroo fayyadami ykn jechota barruu birottin bakkabuusi.
Qaqaa Barbaadii Baakka Buusi
Galmee guutuu kessatti barruu barbaaddu nidandessa, filmaata barruu ka'aa tokko male qaqaa barbaadiif baakka buusi bani. Galmee kee keesatti kutaa tokko barbaaddu yoo fete, duraa kutaa barruu fili, booda qaqaa barbaadii baakka buusi bani.
Qaqaa barbaadii baakka buusi banuf Gulaali - Barbaadii Baakkabuusi cuqaasi.
Tokkoon lamaanii,Barbaadi ykn Mara Barbaadi cuqaasi.
Yammu Barbaadii cuqaastu, Barreessaan barruu itti aanuu isa galfata keetiin qixxee sitti agarsiissa, kana booda gara barruu itti aanee argamuutti deemuudhaaf, Barbaadi cuqaasi.
Yoo qaaqa cuftee, osso qaaqa hinbanini, barruu itti aanuu argachuuf, furtuwwan (Ctrl+Shift+F) walitti gad-dhiibuudde argachuu nidandeessa.
Akka filannootti, barruu itti aanuu keessa ykn galmee keessaa wanta kabiroo kamuu keessa naanna'uuf, sajoowwan mirga gara gadii galmee irraa fayyadamuu nidandeessa.
Yammuu ati Mara Barbaadii cuqaastuu, Barreessaan barruu isa galfata keetiin qixxee tahe mara sitti agarsiissa. Amma akka fakkeenyaatti barruu argaman mara gara yabbuutti, ykn barruu maraaf altokkichaan akkaataa arfii fayyadamuu ni dandeessa.
Barruu bakka buusuu
Akka barruu barbaaduu ossoo hintaanee, barruu filannoo ammaa qofaa irratti bakka buusuun murtaa'aa ta'uu hindanda'u.
Qaaqa Barbaadii fi Bakkabuusi banuuf, Gulaali - Barbaadii fi Bakkabuusi filadhu.
Sanduuqa barruu Dhaan bakkabuudi keessaa barruu argamaniin bakkabuusuudhaaf barruu galchi.
Yoo barbaadde, Bakkabuusi ykn Mara Bakkabuusi.
Yammuu Mara Bakkabuusi cuqaastu, Barreessaan barruu galfata keetiin walsiman mara bakkabuusa.
Ati barruu mara kan galmee kee keessaa akkaataa keeyyatatin ramadame argachuu barbaada, fakkeenyaf akkaataa "mata dureen 2".
Barbaachaf akkaata fili, itti aansun Barbaacha ykn Barbaacha Maraa cuqaasi.
Ati barruu mara kan galmee kee keessaa akkaataa dhangeessuu arfiilee sirrii murtaa'en ramadame argachuu barbaada.
Dhangii barbaaduu qofti amaloowwan arfiilee sirrii barbaada, amaloowwan akka kutaa akkaataati fayyadamame hin barbaadu.
Qaaqa guddisuufDirqala Dabalaa cuqaasi.
Qabduu Dhangii cuqaasi.
Barbaadi ykn Mara Barbaadi cuqaasi.
Walfakkeenyi barbaacha barruu barruun barbaacha isaani irraa caalaati walfakkaatu barbaadu danda'a.
Dirqala Walfakkeenya barbaacha mirkaanneessun qindeessuu jijjiruf qabdu ... dirqalaan cuqaasi. (Lakkoofsota sadeen mara dalagaa 1f qindeessun barruu Ingiliffaaf garii ta'a.)
Wantoota barbaaduu fi filachuuf Nanna'ichi meeshaa barbaachisaa dha. Akkasumas toora mul'annoo galmee keeti dhiheessun boqonnaalee sochosuu fi qindeessuuf Nanna'icha fayyadamuu dandeessa.
Foddaa Nanna'icha banuuf Gulaala - Nanna'aa fili.
Wantoota saguuf Nanna'icha fayyadami, geessituuwwan fi wabiiwwan galmee wal fakkatu ykn galmeewwan gara biroo banamaa keessa.Odeeffannoo dabalataaf Navigator ilaali.
Foddaa Nanna'inaa xiqqaa banuuf geengoo cuqulisa gajalla mirgaa galmee keetii jiruun saajoo cuqaasi.
Dadaftee gara wantoo itti aanuut utaaluuf ykn barruu itti aanuu galmee keessaa barbaaduf foddaa Nanna'ina fayyadami.
Citoota Sararaa Haquu
Calc keessatti Argachuu fi Bakka buusuu
Title is: Barreessa irratti Barbaaduuf Baakka Buusu